अपांगताले नछेकेको अचम्मको कला: किन बिक्दैन उनको सिप ? के छ गाउँपालिकासँग उनको चित्त दुखाई? (भिडियो रिपोर्ट) – Gulminews
Home/भिडियो/अपांगताले नछेकेको अचम्मको कला: किन बिक्दैन उनको सिप ? के छ गाउँपालिकासँग उनको चित्त दुखाई? (भिडियो रिपोर्ट)
अपांगताले नछेकेको अचम्मको कला: किन बिक्दैन उनको सिप ? के छ गाउँपालिकासँग उनको चित्त दुखाई? (भिडियो रिपोर्ट)
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ कार्तिक २८, बिहीबार २२:०९ मा प्रकाशित
धन बहादुर रास्कोटीको एउटा संघर्षको कथा । उनको दुबै खुट्टाले काम गर्दैन । जन्मदै अपांगता भएर जन्मेका रास्कोटीको शिप, मेहनत, पौरख भने कुनै सपांग ब्याक्तिको भन्दा कम छैन ।
आफ्ना साथीसँगीहरु रमाउँदा खेल्दा र कमाउन देश बिदेश लाग्दा आफु भने अपांग भएकै कारण यि सबै चाहना लुकाएर बसेका छन् धन बहादु रास्कोटीले । बिहे गर्ने चाहना नभएको पनि कहाँ होला र? तर आफ्नो अवस्था यस्तो हुंदा त्यो चाहना पनि मनमै रह्यो ।
जिन्दगीमा संघर्ष पनि नगरेको हैन । हातमा सिप नभएको पनि हैन, उनले नजानेको केही छैन । सिकर्मी, डकर्मी होस् या घर खेतको काम सबै गर्छन् उनी । दाउरा चिर्ने र रुखमा चढेर घाँस काट्ने उनको पहिले देखीकै दैनिकी हो । काठ बाँसका सुन्दर हस्तकलाका सामाग्रीहरु पनि बनाउँछन् । आँफैले जानेको सिप बेचेर खाने प्रयास नगरेको पनि हैन । पैसा कमाएर गुजारा चलाऊँला भनेको उनको सिपले बजार पाएन ।
गुल्मी जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिका वार्ड नं २ स्थित हुल्टुङ स्थाई घर भएका ४७ बर्षिय धन बहादुर रास्कोटीको पिडा हो यो । आफ्नो घर हुल्टुङबाट चार पाउ टेकेरै तम्घास सम्म पुगेको अनुभव पनि छ उनको ।
हेरौँ गुल्मी टेलिभिजनले तयार पारेको एक भिडियो रिपोर्ट: